एक प्रयोग वाहन खरीद एक daunting कार्य हुन सक्छ. There areafew things that you can check yourself to ensure that you are gettingagood vehicle and good quality. One of the most important things you need to check when buyingaused vehicle is the engine crank case oil. यो पोस्ट मा हामी तिनीहरूलाई जाँच गर्न कसरी र खोज्न के कवर हुनेछ.
हामी एक प्रयोग कार भन्दा देख गर्दा जाँच गर्न रुचि धेरै पहिले कुरा इन्जिन तेल छ. के मेरो मनपर्ने कुराहरू एक अगाडी जाने र कार भित्र बस्न र एक प्रतिष्ठित तेल परिवर्तन कम्पनी देखि एक अन्तिम परिवर्तन तेल स्टीकर खोज्न छ. यो परिवर्तन भयो भनेर मिति र लाभ हेर र पनि ओडोमिटर हाल पढिरहेको छ कि लाभ हेर्न. यो कारण लाभ र मिति या त मा पछिल्लो छैन भनी पक्का. यो स्टीकर सूचीकृत छ कि तेल निर्माता द्वारा सिफारिश छ कि तेल को नै वजन मिल्न पनि सुनिश्चित गर्न जाँच. सबैभन्दा पटक यो सिर्फ हुड अन्तर्गत देख द्वारा तेल को सही वजन निर्धारित के गर्न सजिलो छ. सबैभन्दा निर्माताहरु को सनकी मामला तेल भरण टोपी मा त्यहाँ सूची वा एक स्टीकर जानकारी दिन्छ कि हुड अन्तर्गत केही जहाँ छ.
तिनीहरूले कृत्रिम तेल वा पारंपरिक प्रयोग भने पनि के तपाईं मालिक सोध्न आवश्यक. यो कारण सनकी मामला मा प्रयोग एक वाहन थियो एक पटक कृत्रिम तेल तपाईं स्नेहन समस्या जोगिन कृत्रिम प्रयोग जारी ठान्नु छन् छ कि छ. केही नयाँ गाडी अब कारखाना देखि सनकी मामला मा सिंथेटिक तेल आउन, र वाहन मात्र कृत्रिम तेल यो प्रयोग गरेका छन् सक्छन् कि तपाईं बताउँदा हुड अन्तर्गत वा कोर समर्थन मा एक स्टीकर हुनेछ. सिंथेटिक्स बारेमा सम्झना गर्न एउटा कुरा यो एकदम अधिक तेल परिवर्तन भएको बेला तपाईं खर्च हुनेछ छ. नियमित तेल संग एक तेल परिवर्तन खर्च हुनेछ $20 गर्न $25, सिंथेटिक्स संग एक तेल परिवर्तन खर्च हुनेछ, जबकि $50 गर्न $80 यो सनकी मामला धारण कति तेल मा निर्भर.
अर्को, तपाईं अगाडी जान र हुड खोल्न चाहनुहुन्छ. इन्जिन सनकी मामला स्नान छडी पत्ता लगाउनुहोस्. सामान्यतया यी स्नान लाठी एक पहेलो ह्यान्डल वा उभार छ. तपाईं संग एक थाड़्ना छ. अगाडि जानुहोस् र स्नान छडी पुल र यो बन्द विप. Then reinstall the dip stick and pull it out again and check to see that the oil is in the recommended range. यो dipsticks सनकी मामला तेल को सुरक्षित सञ्चालन सीमा संकेत तिनीहरूलाई चिह्नों केही क्रमबद्ध छ. तेल केही आफ्नो औंलाहरु धारण, या तपाईं को थाड़्ना सेतो छ भने, एक यो एक राम्रो नजर ले अगाडी जान. यो कस्तो रंग छ? छ एक इन्जिन मा 150 हजार किलोमिटर वा कम, यो कम्तीमा केहि यो सुनको उपस्थिति को हुनुपर्छ. यो एक सानो फोहोर छ भने यो ठीक छ, यो फेरि तेल परिवर्तन गर्न समय नजिक छ विशेष गरी यदि.
अर्को, तेल गंध ( म हास्यास्पद ध्वनियां थाहा, तर मलाई विश्वास). यो एक जलेको गन्ध छैन गर्नुपर्छ. यो या त यो एक ग्याँस बास्ना छैन गर्नुपर्छ. यो कच्चा ग्याँस जस्तै Smells भने, त्यसपछि त्यहाँ ईंन्धन सिस्टम संग समस्या छ र यो crankcase मा कच्चा ईंन्धन dumping सकिन्थ्यो. यो एक चेक इन्जिन प्रकाश बन्द सेट थियो तर सबैभन्दा पटक.
इन्जिन तेल जाँच तपाईं राम्रो गुणवत्ता को एक वाहन खरीद छन् आश्वस्त गर्न जाँच हुनुपर्छ भनेर धेरै कुराहरू एक. जाँच गर्न कुराहरू र तिनीहरूलाई जाँच गर्न सर्वोत्तम तरिकामा अझ बढी सिक्न, हाम्रो वेबसाइट @ KNWAutobody.com